सम्पादकीय | Everest Times
प्रक्रियामै सरकार गठन
- निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसकेको छ । निर्वाचनबाट जनताले नयाँ जनादेश दिएको छ । नयाँ जनादेशअनुसार नयाँ सरकार यसअघि नै बन्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन । यसका कारण भनेको संविधानमा देखिएको त्रुटीपूर्ण छिद्र नै हो । संविधान बनाउने बेलामा गरिएको बेवास्ता नै अहिलेको मुख्य कारण हो । संविधानमा भएका कमजोरीलाई टेकेर जनादेशअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो ।
- बिना औपचारिक निम्तो भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज दुई दिने नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका छन् । उनी नेपाल सरकारको औपचारिक निमन्त्रणा बिना नै सरकारी विशेष विमानमार्फत नेपाल आएर फर्किए । उनको यो अपर्झट नेपाल भ्रमण केका लागि थियो भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सकेको छैन । सुस्माकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो भ्रमण नेपालका साथीहरुलाई भेट्न आएका हुन् । तर, भारतले यस्तो भ्रमणलाई सामान्य भन्दा पनि आफ्नो अनुकूल कति प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा पक्कै पनि हेक्का राखेकै छन् ।
- काम चलाउ सरकारले निकै लोकप्रिय निर्णय गर्‍यो । वृद्धवृद्धाको उमेर घटायो । अर्थात अब ६५ वर्ष पुगेका बृद्धबृद्धालाई भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो । भूकम्प पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थपिदिने अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । यी निर्णय जनताका पक्षमा पक्कै पनि छ । यो निर्णयले जनतालाई फाइदै पुग्छ ।
- संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार गठन हुनैपर्छ । त्यति मात्र होइन, प्रदेश सभा गठन हुनैपर्छ । त्यति मात्र होइन, प्रदेशको अस्थायी भए पनि राजधानी तोक्नैपर्छ । तर, यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारबाट भएको गम्भीर त्रुटीका कारण अहिले देश आन्दोलनतर्फ धकेलिएको छ ।
- राजनीति केका लागि गर्ने ? यो राजनीति गर्नेका लागि मात्र प्रश्न होइन । यो त राजनीति गर्नेलाई सघाउनेहरुका लागि पनि हो । यो प्रश्नले पक्कै नेताका लागि मात्र हो भनेर ठानियो भने गलत हुनेछ । यो प्रश्न नेता र नेतृत्वलाई मात्र होइन । यो प्रश्न त आम नागरिकका लागि हो । आम मतदाताका लागि हो यो प्रश्न । यो प्रश्नको उत्तर खोज्न त्यति सहज भने पक्कै छैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राजनीति केका लागि होला त ? यो प्रश्नको उत्तर पाउन त्यति सहज भने पक्कै पनि छैन ।
शान्ति सुरक्षामा प्रश्न
- देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताले अपेक्षा गरेकै थियो ः जनताले अब शान्ति सुरक्षा पाउने छन् । असुरक्षित हुनुपर्ने छैन । तर, त्यसो भएन । सबैभन्दा धेरै जनमत पाएका एमालेका नेताले नै गोलीको शिकार हुनुपर्यो । प्रशंग हो बुटवलमा भएको बलु पौडेलमाथि भएको गोली प्रहार ।
- वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेपछि अब नयाँ सरकार पनि उनीहरुले नै गठन गर्ने स्थिति देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । यो सार्वजनिक परिणामले वाम गठबन्धनको सहज बहुमत देखिएको छ । यो परिणामले पक्कै पनि नेपालमा वाम शक्तिको मत अधिक रहेको स्पष्ट भएको छ । अहिले आएको मत परिणामले पक्कै पनि वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित नै छ ।